Maalinta Badbaadada Bukaanka oo caalamka laga xusay – iftiin fm
Maalinta Badbaadada Bukaanka oo caalamka laga xusay
September 17, 2020 September 17, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Waxaa manta caalamka laga xusaya Maalinta Badbaadada Bukaanka Adduunka.
Tani waa maalin loo qoondeeyay badbaadada bukaanka inay tahay mudnaanta caafimaadka adduunka iyada oo ujeedadu tahay kordhinta wacyiga bulshada iyo ka-qaybgalka, kor u qaadista fahamka caalamiga ah, dhiirrigelinta midnimada adduunka, iyo hormarinta amniga bukaanka.
Xuuska maalintani ayaa ku soo beegantay iyadoo uu caalamka ka jiro cudurka corona oo sameeyey qeybaha kala duwan ee noolasha halka shaqaalaha caafimaadka ay qaarka uu fuulaan in uu saameeyo cudurkani COVID 19-ka .Mawduuca sannadkan waa Badbaadada Shaqaalaha Caafimaadka: Mudnaanta Badbaadada Bukaanka.
Dhammaan 194-kii waddan ee xubnaha ka ahaa Ururka Caafimaadka Adduunka bishii Maajo 2019, waxay taageereen aasaasidda Maalinta Badbaadada Bukaanka Adduunka oo la qabanaya 17-ka Sebtember sannad kasta.
← Kisaska cudurka corona oo hoos uu dhacay dalka Koonfur Afrika
Maamulka KURA oo baaq uu diray dhalinyarada →